2012 | ASHIN PANNASIRI
Al Jazeera သတင်းဌာန၏သတင်းလိမ်ညာထုတ်လွင့်မှုကိုဖော်ထုတ်ခြင်း
အယ်လ်ဂျာဇီးရား (Al Jazeera) သတင်းဌာနမှ ‘ဖုံးကွယ်ထားသော လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှု (Hidden Genocide)’ သတင်းမှတ်တမ်းဗီဒီယိုတွင်ပါဝင်သည့် လိမ်ညာမှုများနှင့် ကြိုးကိုင်လှုပ်ရှားမှုများကို ဖော်ထုတ်ဖွင့်ချခြင်း
Posted by Paynya Siri at 10:26 PM0comments
Hidden agenda of so-called “Rohingya”
1. Parents are pure Chittagonian Bengalis, how can the children be so-called "Rohingya” .
2. No "Rohingya" during British time census records and Burmese census records, therefore no "Rohingya” in Burma. British called them “Chittagonian Bengali” and they speak 100% Chittagonian dilects. They are pure Bengalis. From where the word "Rohingya" has come?
Posted by Paynya Siri at 4:59 AM0comments
A few weeks ago, it was announced onabroadcast of BBC Burmese program that aBurmese national of the Rohingya ethnic group had been granted political asylum inJapan. We should be pleased with this sign of the Japanese government’s humanitarian attitude towards people who could face various kinds of dangers in their homeland,including death, regardless of their race, religion or nationality. However what concerns me in this case, asanative historian of Burma, is the ethnicity of the so-called Rohingyas. Who are the Rohingyas? This issue has beenaproblem for Burma since it gained independence from Great Britain
Posted by Paynya Siri at 6:21 AM0comments
What is the difference between Mahayana and Theravada Buddhism.
Let us discussaquestion often asked by many people: what is the difference between Mahayana and Theravada Buddhism? To see things in their proper perspective, let us turn to the history of Buddhism and trace the emergence and development of Mahayana
Posted by Paynya Siri at 12:47 AM0comments
အင်္ဂလိပ်စာအသံထွက်မှန်မမှန်သိရအောင် စစ်ကြည့်မယ်http://www.tvunetworks.com/downloads/player.htmlWorld Live TV Channel ကြည့် လို့ ရပြီပေါ့http://www.malwarebytes.org/mbam.phpMalware အတွက် ဆော့ဝဲလ် အသစ်ပါ..။http://imtranslatorpro.ourtoolbar.com/
Posted by Paynya Siri at 7:08 AM0comments
Posted by Paynya Siri at 6:17 AM0comments
Full text of speech by US President Barack Obama at Rangoon University, Burma
Posted by Paynya Siri at 5:35 AM0comments
Our everyday life is too mundane and not so beautiful. Everybody in the world is infatuate, wanted and loves Sukha which mean real happiness and enjoys but dislike mental and physical painful feeling that called in Pali Dukha. And also find the way of avoiding and removing unpleasantness
Posted by Paynya Siri at 7:57 AM0comments
The theory of Happiness and Suffering in Theravada Buddhism
Every organism or all living being has happiness and suffering too. So here in this paper, I would like to express that how many kinds of happiness do all living being have and what kinds of happiness are real or true happiness in life and to get our own happiness, what should we do, how to train our mind and also I would like to mention about suffering and how suffering affect human life. So happiness and suffering are going in the very important role in human life and we human are trying to get real happiness, on the other hand trying to get rid of suffering.
Posted by Paynya Siri at 2:40 AM0comments
ဖြူဖွေးအေးမြ ဆောင်းနှင်းစများဖြင့် မိုးကုန်လို့ ဆောင်းဦးကာလကို ချဉ်းနှင်းဝင်ရောက်ခါစ အေးမြတဲ့ ဆောင်းညများကို ကြည်လင်ရွှင်မြူးစွာ လှမ်းကြိုနေတဲ့ ဟေမာန်ဦးကာလအချိန်…
၂၁ ရာစု၏ ရှေးဦးပိုင်းကာလ ယခုလိုအချိန်များသည်ကား လူသားသမိုင်းတွင် တစ်ခါမှမကြုံစဖူး ထူးကဲစွာဖြင့် လူသားတို့၏ နှလုံးရည်တိုက်ပွဲ(Third War)များကို ကမ္ဘာအနှံ့မှ အချိန်တိုင်း၊ နေ့တိုင်း ကြားနေရ၊ မြင်နေကြရ၏။ ကမ္ဘာ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် ကမ္ဘာ့အနောက်ဘက်အခြမ်းတို့မှ မြန်မာ့ပိုင်နက်ထဲသို့ နေ့စဉ်လိုလို ၀င်ရောက်လျက်ရှိသော အင်တာနက်၊ တီဗီ၊ ရေဒီယိုအသံလှိုင်းများမှ တစ်ဆင့်လာသော နှလုံးရည် ချွန်သံ၊ တိုက်ပွဲသံတို့သည်ကား အေးချမ်းလှပတဲ့ ဆောင်းညချမ်းဦးများကို ပူလောင်စေ၊ အရုပ်ဆိုးစေပြန်၏။ ထိုအထဲမှ အပူလောင်ဆုံး၊ အရုပ်အဆိုးဆုံးဖြစ်စေသော စကားတစ်ခွန်းမှာ… Human Right, လူ့အခွင့်အရေး ဟူ၍ဖြစ်၏။
Posted by Paynya Siri at 8:38 AM0comments
ဤစာတမ်းသည် မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အချက်များကို ဖော်ပြထားပါသည်။ အောက်ပါကဏ္ဍများ ပါဝင်ပါသည်။ လက်ရှိအခြေအနေ အပေါ်မူတည်၍ စဉ်းစားတင်ပြခြင်းသာဖြစ်ပြီး သုတေသနလေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
၁။ မသင်မနေရပညာရေး / ကလေးအားလုံးအတွက်ပညာရေး
၃။ ပညာရေးစနစ်အမျိုးမျိုး (Codes of Education)
၄။ အမျိုးသားထုတ်ကုန်ပမာဏနှင့် အမျိုးသားပျော်ရွှင်မှုပမာဏ (GNP vs. GNH)
Posted by Paynya Siri at 7:36 AM0comments
အလွန်အမင်း ပင်ပန်းဆင်းရဲကြရှာသော မိဘများမှ အထီးကျန် အညတရဆန်လွန်းလှသော ဘ၀တစ်ခုအား စတင်ရန် (Liz Murray) လိဇ်မာရီ ဟု ခေါ်သော ကလေးမငယ်အား အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ နယူးယောက်ပြည်နယ်၊ ဘရော်းစ်(Bronx) မြို့တွင် ၁၉၈၀ ခု၌ မွေဖွားခဲ့သည်။
သူမ၏ မိဘများမှာ ဆေး၊ ဘိန်း၊ စွဲသူများဖြစ်ပြီး မိသားစုအတွက် ထောက်ပံ့မည့် အစား ရသမျှ မရှိစလောက်သော ဝင်ငွေများကို သူတို့တချက်ချေသာ စိတ်ဖြေရာအဖြစ်သာ အသုံးပြုလေ့ရှိကြသည်၊ သမီးတို့အတွက်ဖို့ကိုကား သူရို့အတွေးတွင် အရက်သောက်၊ ဘိန်းချူဖို့လောက် အရေးထားလေ့မရှိကြချေ။
လိဇ် (Liz) နဲ့ သူမ၏ အစ်မလီစာ (Lisa) တို့ နှစ်ဦးမှာ နီစရာ နေရာမဟိ၊ စားစရာ အစာမဟိ၊ ရုံစရာအ၀တ်ကောင်းမဟိ၊ မွတ်တစ်လှည့် ငတ်တစ်လှည့်ဖြင့် အသက်ကို ပင်ပန်းဆင်းရဲကြီးစွာ ဆက်နေရရှာသည်။
အဝတ်အစား ဝတ်ရန်မရှိသဖြင့်တစ်ထည်တည်းရှိသော အဝတ်တစ်စုံကို နေ့တိုင်း ညစ်ပတ်၊နံစော်နေသည်အထိ ဝတ်ဆင်နေရသည်။
စတိုးလ်ဆိုင်များမှ လွင့်ပစ်သော အစားအစာများကို ကောက်စားရင်း တစ်နေ့ တာဘဝကိုပင် မျှော်လင့် ချက်ကင်းမဲ့စွာ ဆက်နေရသည်။
Posted by Paynya Siri at 7:12 AM0comments
ကျောင်းစတက်တဲ့အရွယ်မှာ ကောင်လေးဟာ ကျောင်းအားချိန်တိုင်း အဖော်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့ ဖိနပ်လိုက်တိုက်ခဲ့တယ်။ တကယ်လို့ ဖိနပ်တိုက်သူမရှိရင် သူတို့ဗိုက်ငတ်ရပါတယ်။
Posted by Paynya Siri at 7:06 AM0comments
Al Jazeera သတင်းဌာန၏သတင်းလိမ်ညာထုတ်လွင့်မှုကိုဖော်ထ...
Preface This is an assignment to serve the Subject of Buddhism in Contemporary world and the topic here I would like to mention ...
A Study of Dhammakaya in Mahayana Buddhism
According Mahayana Buddhist tradition, the Buddha has three bodies or three aspects of personality, they are; Dhammakaya, ...